Sodàna: Ireo Heloka Bevavan’ny Ady ao Darfour, Ny USS Cole, Taovolo Iray Lamaody Ary Mbola Betsaka Koa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2017 3:58 GMT
Tena navitrika ny tontolon'ny blaogy sodanezy nandritra ny herinandro telo farany. Atombontsika amin'ny filazana iray an'ny Fitsarana Iraisam-pirenena, izay namoaka ny anaran'ireo olona roa voarohirohy mikasika ireo heloka bevava tao Darfour.
« Ahmed Mohamed Haround dia iray amin'ireo olona roa voarohirohin'ny Fitsarana Iraisam-pirenena ho toy ny mpanao heloka bevava an'ady tao Darfour. Sambany aho androany vao mba nahita ny sariny. [Sary Sudan Tribune]
2) Ny “Drafitra B” amerikana (sy ny politikany hamaizana an'i Sodàna) izay manohitra ny vaovao milaza fa eo andalam-panorenana ny ivontoerany tena manandanja ao Afrika Atsinanana ao Sodàna ny CIA, ary koa mifanohitra amin'ny fiarahamiasa misy eo amin'ireo sampan-draharaha miafina sodanezy sy ny CIA (endri-javatra iray tsy resahan'ireo media amerikana loatra na tena tsy misy mihitsy)”.
Manambara i Black Kush [En] fa mpiasam-panjakana roa avy any sodàna atsimo no voasambotra noho ny kolikoly.
.”Fanapahankevitra iray feno fahasahiana avy amin'ny governemanta Sodàna-Atsimo manohitra ny kolikoly izany. Nanjary iray amin'ireo mpanankarena indrindra tao Khartoum i Martin Malwal nony taty aoriana ary nahatonga resabe tato ho ato ny harenany. Toa natao sorona ilay iraikalahy faharoa saingy mbola hisy loha hafa hianjera. Fotoany ihany koa izao, na izany aza.”
Sarihany ihany koa ny saina ho amin'ny fihaonan'ny filoha lefitr'i Sodàna, Salva Kiir, tamin'ireo mpikomy tao Darfour.
“Farany, miezaka mitàna ny andraikiny mikasika ny krizin'i Darfour ny filoha lefitra Salava Kiir. Tsy azo ekena ny fihetsika tsy misy fandalàna ataon'ny antoko SPLM [Hetsi-bahoaka ho fanafahana an'i Sodàna]. Ao amin'ny governemanta no mitoetra ny antokony ary azo antoka fa ho voatsikera ihany koa. Manantena isika fa hitondra vokatra ireo ezaka ataony.”
Nandritra izany fotoana izany, tezitra tamin'ny fitsaràna natao tao Sodàna tamin'ireo fianakavian'ireo tradozan'ny fipoahan'ny USS Cole i Hipster .
“Ankehitriny, azoko antoka 100% fa nataon'i Etazonia lasibatra ny fireneko. Hatramin'ny nilazàna fa tsy nahomby ny tetikadin'i Darfour, mampiasa hevitra hafa izy ireo mba hangejana ny governemanta. Nahoana i Etazonia no tsy mandoa ireo onitra sy ireo tombontsoa mikasika ny daroka baomba tamin'ny orinasa Al Shifa, tamin'ny taona 1998? Hitan'ireo masoko tsara ny balafomanga namakivaky ny habakabaka!”